Incoko ngaphandle ubhaliso, iminyaka - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Ngaba azidingi zithungelana kunye iidilesi ze-imeyili, khetha i-data, okanye uzalise a ifomu yobhalisoUdinga nje ukuza kutsho nge nickname (elinye igama), apho uyakwazi ukugcina okanye tshintsha kunye ngamnye ufikelelo, okanye uyishiye iiprogram kwi (bust). Ngaba azidingi fumana i-software, wena musa kufuneka ufake na iinkqubo, wena musa kufuneka kuba besoyika ukuba PI yakho kwi-Intanethi unxulumano iyabonakala, ezangasese kwaye anonymity ingaba guaranteed.
Oku kubangelwa ukuba visitors ingaba kakhulu fond ka-umculo
Incoko ngaphandle ukubhaliswa yi free, ngokukhawuleza kwaye silondolozekile, uvumela ekhawulezileyo igalelo kwaye ikhuselwe.
Nangona kubalulekile i-CDECOMMENT isiqhagamshelanisi kwaye ke traditionally ezikhoyo kunye rhoqo, iinkqubo, wonke umntu linelungelo ukusebenzisa incoko ngaphandle ubhaliso, unezinto ezininzi WeChat, ngoko ke ngu-mnandi, ngoko ke kulula kakhulu ekhawulezileyo ukufikelela kwi-Intanethi kwaye incoko ngaphandle ubhaliso kwaye ubulungu.
Abasebenzisi banikwa a room isixeko apho sonke zithungelana kunye, kwaye isakhono kuba private iincoko nabanye abasebenzisi.
Neminyaka engama-nxaxheba iifayile coincides kunye ubudala ukuze abe ufikelele.
Sisebenzisa characterized ngu dibanisa atmosphere, ngenxa yokuba dialogue ngomatshini phakathi iintanga kwaye phakathi Mature abantu. Ngoko ke, ngendlela yokubhala, kwi-ubudlelwane kunye kukho abathile closeness kwi-disputes, nangona obvious neeyantlukwano kwi-izimvo kwi closeness, nto leyo manifested kwi-Jikelele banqwenela ukuya kuhlangana yakhe calmly, politely kwaye respectfully. Ads okanye amakhonkco kwezinye zephondo azivumelekanga kwindawo isiqhagamshelanisi. Kuvunyelwe endaweni ethe ngqo amakhonkco ukuba YouTube okanye ezinye zephondo ukuba unxulumaniso ividiyo clips, umculo videos, okanye iingoma. I-iholo ngasentla sele wesizwe uphawu, visitors kanjalo bevela ngaphesheya, zonke isi-Italian imimandla ingaba bemelwe abasebenzisi ukusuka zonke phezu Italy.
Kobuso abafazi corresponds ukuba ebusweni abantu baza kugqiba ukulingana phakathi amadoda nabafazi, evumela kuba beautiful kunye nabafana dialogues.
Igumbi highly amaxabiso gallantry kwaye respectful indlela unxibelelwano kunye abasebenzisi, ingakumbi abasetyhini.
I-iholo ngu-vula ngexesha ishishini iiyure, nayiphi na inconveniences okanye iingxaki ukufikelela ingaba ngqo hayi kakhulu rhoqo, kuphela ngenxa sporadic womnatha failures okanye womnatha noqhagamshelwano kunye musa kuxhomekeka isiqhagamshelanisi yolawulo.
Isiqhagamshelanisi Abalawuli, eneneni, musa kuba umncedisi umnini ukuba lusekelwe umncedisi, ezibangela ukuba kuthungelwano enika inkonzo ekubeni represented. Eli phulo ayikho alungiselelwe abarhwebayo ngeenjongo okanye inzuzo yemali. Kuphela imbono yomntu abo sele yenziwe a isithuba kuba forming a loluntu ekuhlaleni kwi web, kunye free ufikelelo, exchange, onesiphumo kwetitki, ukuphuhlisa friendships kwi-intanethi. Ukuba umsebenzisi ke ubuso ngu ezikhuselweyo yi-anonymity, kwaye kwangoko isithuba frequented nge abantu xa kuqaliswayo engaziwayo, abasebenzisi ingaba advised hayi wabe, ukuba akunjalo, abantu abakhoyo highly reliable, lobuqu okanye ziyimfihlo ulwazi ukuba ayikwazi kuchitha yabo yangasese. Etiquette corresponds ukuba etiquette a lencoko okanye indlela zithungelana nabanye abantu. Zininzi miyalelo, kwaye thina bakhetha rely kwi ngokufanayo evakalayo kwaye iingqiqo zethu visitors. Nangona kunjalo, elungileyo umthetho ayikho ukubhala jackets kwindawo yokuqala zonke caps kwi-i-intanethi ngxoxo ingaba i no ka-shouting. Lo ngumzekelo absolutely undesirable provocation ngakulo abanye abasebenzisi kwaye, kunjalo, insults kwaye vulgarity azivumelekanga. Nayiphi na ifomu racism okanye udushe kufuneka ukugxotha kwi-iincoko.
Oku kanjalo usebenza ngokunye ekhethiweyo ngumsebenzisi.
Ngoko ke nceda musa ukusebenzisa iintlobo ukuba ingaba vulgar.
Dating kunye ifowuni amanani ividiyo Dating nge-girls zonke phezu kwehlabathi ividiyo Dating profiles esisicwangciso-mibuzo roulette-intanethi free free Dating site ngesondo fun ividiyo free esisicwangciso-mibuzo roulette kunye umnxeba dating site ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko roulette-intanethi Chatroulette nge-girls